မန်းလေးဂေဇက်ပေါ်ကသတင်းသမားများ..Journalists | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းလေးဂေဇက်ပေါ်ကသတင်းသမားများ..Journalists
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Mar 23, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
ကျွန်တော် မွေ့လျှော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရွာကိုချက်ချင်းသတိရသွားမိတယ်..
ကျွန်တော့်ရွာဆိုတာက “မန်းလေးဂေဇက်” ဆိုတဲ့အင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့
ရွာကြီးပါ…လောကသဘာဝအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရွာကြီးမှာလဲ လူဟောင်းတွေ
ယူဆောင်လို့ ရွာကိုလာရောက်အခြေချနေထိုင်လာကြတာခုဆို တကဲ့စည်ကားတဲ့ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်နေပါပြီ..သဂျီးရဲ့မေတ္တာမှော်အစွမ်းကြောင့် ရွာထဲဝင်အခြေချမိသူတွေခမျာ
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ စာတွေဖတ် ဖတ်ရာကအားမရတော့ကွန်မန့်တွေပေး
နဲ့တကွ ရွာကြီးပါတိုးတက်စေချင်လို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတဆင့်တင်ပြလိုက်ရပါကြောင်း။
ယနေ့ သတင်းထောက်ဟူသောစကားလုံးအစား journalist ဟူသော စကားကိုအသုံးများ
သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Journalist သည် သတင်းထောက် လုပ်သူသာမက စာရေး
သူ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။သူသည် သတင်းစာ ဂျာနယ်များတွင်သာ
မက ရေဒီယို၊တီဗီ၊online တို့တွင်လည်း ပါဝင်သူဖြစ်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့် ဂျာနယ်လစ်သည်
ကျယ်ပြန့်သော စကားလုံးဖြစ်သောကြောင့်အသုံးများသည်။ယနေ့မီဒီယာသည် စတုတ္ထ
မဏ္ဍိုင် ဖြစ်လာသည်။တိုင်းရေး ပြည်ရေးကို ပြည်သူတွေသဘောပေါက် နားလည်အောင်မီး
မောင်းထိုးပြသလို အစိုးရကိုလည်း ပြည်သူတွေကိုနားလည်ဖို့မီးမောင်းထိုးပြသည်။
ထို့ကြောင့််မီဒီယာသည် ပြည်သူနှင့် အစိုးရအကြား ပေါင်းကူးသဖွယ် ဖြစ်လာလေသည်။
ထို့ကြောင့် ဂျာနယ်လစ်များသည် ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ အရည်အသွေးကို
Journalists များအနေဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်အမြဲတစေ မေးခွန်းထုတ်ရန်လိုသည်။မေးခွန်း၁၁ချက်
-ဒီအပတ်မှာ သတင်းရနိုင်သော နေရာတွေကို ငါသွားနိုင်ရဲ့လား(ညွှန်နိုင်ရဲ့လား)
-သတင်းရနိုင်သော နေရာသစ်တွေကိုကော ငါရှာဖွေရဲ့လား
-အရေးကြီးတာတွေ သေချာတဲ့ သတင်းတွေကိုထိပ်တန်းတင်ပြီး မရေရာတာတွေကို ခေတ္တဖယ်
-ငါ့ရဲ့အရေးအသားဟာ တိကျပြီး ရှင်းလင်းရဲ့လား
-ငါ့သတင်းတွေဟာ ပြည်သူတွေ ခံစားချက်နဲ့ အညီဖြစ်အောင် ငါရေးရဲ့လား
-ကိန်းဂဏန်းတွေကို ရေးတဲ့အခါ ငါက နှိုင်းယှဉ်ပြသမှုတွေနဲ့ ရေးသားခဲ့ရဲ့လား
-သိပ်ပံ စကားတွေ အတိုကောက်ရေးတာတွေကို လူတွေသိအောင် လုပ်နိုင်ရဲ့လား
-သတင်းလိုက်တဲ့အခါ ငါတစ်ကယ်ပဲမေးခွန်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုံလုံလောက်လောက်
-ဒီသတင်းတွေကို နောက်ဆက်တွဲရေးနိုင်ဖို့ ငါဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲ။
Journalists (သတင်းထောက်တွေ အယ်ဒီတာတွေ)အားလုံးအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှုသည် အရေးပါသည်။journalists များသည် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လေးစား
ကာ ပြည်သူ့အကျိုးကို အဓိကထား သတင်းများကိုပေး သတင်းရေးသူတွေ ဖြစ်စေဖို့ လို
ချစ် ရွှင် သနား တည်ကြား ကြမ်းကြုတ် ရက်စက် ကြောက်ရွံ့ ရဲဝံ့ အံ့သြ…
ဆိုတဲ့ ရသ၉ပါးထဲက တစ်ပါးပါးရစေသင့်လို့ဒီစာစုကိုတင်ဆက်မိပါကြောင်း။
ကျနော်ရေးတာတွေကတော့ အခုထိ အစ်ကို့ပို့စ်ထဲက အချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်တာပဲဗျာ ကြိုးစားပြီးရေးပါ့မယ်
ကိုကြီးမိုက်ကြီးရေ …. မှန်လိုက်တာတော် … ကျွန်မတို့လည်း MG ဘိန်းလည်းစွဲနေတယ် … ကိုကြီးမိုက်ပြောသလို စုံလင်အောင်လုပ်ချင်ပါတယ် ကိုယ့်မှာကလည်း ထမင်းစားတဲ့အလုပ်ကလေးကတစ်ဖက်ဆိုတော့ အချိန်ပေးပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်မလုပ်နိုင်ဘူး … ၃၁ ရက်နေ့တွေ့မှပဲ ဆက်ဆွေးနွေးဦးမယ် ကိုကြီးမိုက်ကြီးရေ … လာခဲ့နော် ဆက်ဆက် ….
(စာတွေဖတ် ဖတ်ရာကအားမရတော့ကွန်မန့်တွေပေး…ပေးနေရင်းဖီးတက်လာတော့ ပို့စ်တွေတင်…တင်ရင်းနဲ့ပို့စ်မတင်ရတာကြာတော့…. ဘာပို့စ်တင်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်း..ကင်မရာကိုင်သူကိုင်…အင်တာဗျူးလုပ်သူလုပ်.. အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်ဆိုသလို.. ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်အပျက်ကလေး
ကိုယ့်ကိုများ စောင်းပြောနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။
အော်- ဒါ့ထက် သဂျီးက CJ card လုပ်ချင်ရင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုထားသေးသလားလို့…
စောင်းပြောသလိုတောင် ဟုတ်ဘူး ဒဲ့ပြောလိုက်သလိုပဲ
အများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် သတင်းမျိုး တခုခုပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးကို ကြိုးစားပြီး ရေးပါတယ်..
ခုလို အချက်ကျကျ သိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးကောင်းသွားတာပေါ့ဂျာ
မီဒီယာ လုပ်ထုံးတွေ.. ရှာတင်ပေးတာ.. ကျေးကျေးနော..။
သိတဲ့သူ.. ဖတ်ဖူးသူတွေလည်း.. ရှာတင်ကြပါဦး..
လုပ်ထုံးနည်းဟန်အသစ်တွေလည်း.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ.. ပါဝင်လုပ်ရင်း.. ငြင်းကြခုန်ကြနဲ့.. ဆွဲကြပေါ့..
ဒီခေတ်ကို ..နောင် အနှစ် ၅၀ကကြည့်ရင်.. ခေတ်ပြောင်းနေချိန်ကြီးလို့.. မြင်ကြမှာပါ..။
သမိုင်းတခေတ်ကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး.. ပုံဖေါ်နေတယ်မှတ်ကြပါလို့..။
ဒို့ရွာသူားတွေဟာ.. မြန်မာပြည်ရဲ့.. အဦးဆုံး CJ ( Citizen Journalist )တွေပေါ့..
CJ card ကို.. ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့.. ပြင်နေပါတယ်.။
ဟုတ်ကိုမိုက် ကျွန်တော်တို.လဲ ကိုမိုက်ပြောသလိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ..နော်
ကျွန်တော်တို.က လဲ ပို.စ်ဆို တင်ချင်ရက် စက်စက်ကို ဖြစ်နေတော့ တွေ.ကရာ သတင်းအတင်း အကုန်အစုံကို တင်နေမိတော့တာပါပဲဗျာ..
အခုလိုသတိပေးတာ ကျေးဇူး…. ရှဲရှဲညီ သွေးပချိ အာဘွားးးးးးး ဟိဟိ
လက်မလေးထောင်ပြီး မြှောက်ပေး (အဲ့) အားပေးတွားပါဂျောင်း ဟီးးး
စာဖတ်သူကနေ ရေးသူအဖြစ်ပြောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ ကျမလည်း မြင်သမျှ တွေ့သမျှတွေကို စိတ်ကူးထဲမှာတော့ post အဖြစ်ရေးနေမိတာပဲ။ ရသ တပါးပါး ပါနိုင် အောင် တော့ ကြီုးစား ရအုံးမယ်။
ငါ့သတင်းတွေဟာ ပြည်သူတွေ ခံစားချက်နဲ့ အညီဖြစ်အောင် ငါရေးရဲ့လား
ဒါလေးတော့ချွင်းချက်ပေးပါ ။ :grin:
ကွန်မန့်ပဲလိုက်ပေးဖြစ်တာများတယ် အရေးအသားကလည်းတောင်ပေါ်သားဆိုတော့ မကျွမ်းကျင်ဘူးဗျ
သူကြီး CJ ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ကျရင် ရွာကြီးကိုမောင်းခေတ်ဦးနော်။
ကိုကြီးမိုက်ရေ၊ တစ်လက်မထောင်သွားပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုဗဟုသုတတွေ ရေးတဲ့ သူတွေကို အားပေးလျှက်ပါ။ အားလုံးအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။ ကျေးဇူးဗျို့။
အောက်ဆုံးမှာရေးထားသလို ရသ တစ်မျိုးမျိုးပေးရင်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုပြောတာက သတင်းသမားတွေ လိုက်နာသင့်တာကိုပါ…
မိရွှေတိုက်ရေ ကောင်းပါတယ်ဗျ ဆက်လုပ်ပါ..အရေးများမှ အတွေးပွားပြီး
mocho..ရေ ရေးပါ ရေးပါ စောင့်မျှော်အားပေးပါ့မယ်(ဂေဇက်ထဲချည်းဝင်နေလို့ချစ်ချစ်ကြီး
ဒီလို စနစ်တကျ ဖြစ်သွားရင် ပိုကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့လို စာဖတ်သူတွေ လည်းအကျိုးရှိပါတယ် အားပေးနေပါတယ် စောင့်မျှော်လျှက်ပါ….
ကိုသစ်မင်း ဆရာသစ်မင်း သူဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာလဲ
ဆရာခင်ဗျား စာပြန်ရေးပါ စာဖတ်သူအတွက်ိ အများကျိုးတွက်
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) ရေ..အားပေးဖတ်ရှု့တာကျေးကျေးပါ။
ခင်ဗျားကိုရော ကျုပ်က ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ…။
ဂေဇတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်ချစ်ကြီး
နဲ့နောင်ဂျိန်ပလေးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ရွာသူမဖြစ်ခင်ထဲကရှိဖူးတယ်။ နောက်မှ အမှတ်တရ ကျန်ခဲ့တဲ့ သက်သေနဲ့ တကွတင်ဦးမယ်။
မိုက်မိုက် ပေးထားတဲ့ ၁၁ ချက် ထဲက ၁ချက် မှ မညီဘူး၊
အဲဒီတော့ ရင်ထဲက အဟောင်းအမြင်းတွေပဲ ရှာဖွေတင်နေရတယ်။
စာအရေးအသားလေးကလဲကောင်း အကျော်လေးကလဲကျွတ် ( အဲလေ)အားပေးသွာ့ပါတယ်နော့
သတင်းပေးတာလေးရော၊ သတိပေးရာလေးရော မိုက်တယ်။ thumb up :-)
မြန်မာပြည် မှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး စေတနာနဲ့ သတင်းသမား လုပ်ချင်သူတွေ / လုပ်နေသူတွေ အများကြီးပါ။
အရီးတို့ ရွာထဲမှာဘဲ အပြုသဘော နဲ့ ဘက်မျှပြီး ရေးသူတွေ အများကြီး ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ ကိုယ့်ပြည်ကို ချစ်လို့ ကိုယ့်ပြည်သူ တွေကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ က ဆွဲထုတ် ချင်ကြလို့ မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကျိုးရှာချင်ရင် အချိန်ကုန်ခံ ဒီမှာ ဘယ်သူက လေလာဖော နေပါ့မလဲ။
စာတစ်ပုဒ် တင်ဖို့၊ ပုံတစ်ပုံ တင်ဖို့ ကို မြန်မာပြည် ကိုးနတ်ရှင်ကို ချော့ပြီး စိတ်ရှည် လက်ရှည် တင်နေရတာ တော်ရုံ စိတ်စေတနာ နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို အသံတွေ ကို သက်ဆိုင်ရာ က နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ဌာန လုပ်ငန်း တိုးတက်အောင် ဆင်ခြင် သုံးသပ်သင့် ပါတယ်။ တကယ်တန်ဖိုး ရှိတဲ့ စကားသံ တွေ အများကြီးပါ။
ဟိုတစ်နေ့က သူကြီး တင်ထားပေးတဲ့ မိုးမခ က မောင်ရစ် ဆောင်းပါးမှာ ပါတဲ့
ပြည်သူတွေရဲ့ စကားပြန်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိဥဏ်ပညာကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ် စကားပြန်ရမယ့်၊
မှောင်ရိပ်ခို အလစ်အငိုက် တိုက်ခိုက်မယ့် သူခိုး၊ ဒါးပြတွေကို ဟောင်ရ၊ ဟိန်းရမယ့်
မီဒီယာဂုတ်ကျားတွေ၊ အောင်နက်တွေ၊ ရန်လုံတွေ၊ ခွေးဝဲစားတွေ ……..
“သင်သာလျင် လွတ်လပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်တော့သကိုး” ဆိုတဲ့ လည်ပတ်သံကြိုး မလုိုဘူး။
(သူ နမူနာ ပေးကောင်းပုံကတော့ မျက်စိ ထဲမှာ ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက်တော့ ပေါ်ခဲ့ပါရဲ့။
သို့သော် တို့များ မီဒီယာ တွေမှာ တော့ ခွေးဘဝ ရောက်ရလေခြင်း ;-) )
သူပြောသလို ဝိုင်းဟောင်သင့်လဲ ဟောင် ကြတာပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်သေးလဲ။
ဒီလို ဟောင်ကြတဲ့ အခါမှာ ကကြီးမိုက် မျှ လိုက်တဲ့ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို ရဲ့ ဒီလို အချက်ကလေးတွေ နဲ့ ညှိပြီး ဟောင် ကြ ရင်တော့ ခဲ နဲ့ အထု မခံရ၊ တုတ် နဲ့ အပြစ် မခံရ လောက်ပါ ဘဲ ထန်းညက် ခဲ လေး မြုံ့ရကောင်း ပါရဲ့ လို့ တွေးမိပါ၏။
ဒီကြား ထဲ သူကြီးမင်းက လဲ
လို့ မှတ်ချက်ပေးပြီး ကျောသပ်ပြီး ပေးတော့ ကာ ….
ကဲ ရွာသူ/သား တို့ ရေ
အဖျင်း အပို မပါဘဲ
ဆင်းရဲတွင်း က ပြည်သူတွေ အတွက်
ကလောင် တစ်ဖက် စွဲ လို့ ဂေဇက် မှာ မီဒီယာ တိုက်ပွဲ ဝင်ကြရအောင်လား
ဝူး အူး အူး အူး အူး အူး – ဝုတ် ဝုတ် ဝုတ်
မိဝေါင်းင်းင်းင်းင်းင်းင်းင်းင်း (ကြောင် …. လန့် ၍ ပြေးသံ)
ကျွန်တော်လည်း စာသိပ် မရေးတတ်ဘူး.. နားလည်ပေးကြနော.. အမှားနည်းအောင်..ပိုပြီးကောင်းလာအောင် ဆက်လက် ကြိုးစားပါ့မယ်…
ရှင် ရေးတာတွေ က အများကြီး အတွေးအမြင် ရစရာတွေ ပါပါတယ်။
အကျိုး ရှိပါတယ် Ko out of… ရေ။ :-)
ဟဲ့ … မိကြီးမိုက်
ညည်းပြောတဲ့ အောက်က စကားလေးက သွေးထွက်အောင် မှန်တယ် …
ကျန်တာတွေတော့ နာ သိပ်နားမလည်လို့ ဘာမှ ပြောတော့ဘူးနော် …
နာလည်း ခုရက်ပိုင်း မတင်ဖြစ်၊ မမန့်ဖြစ်ပေမယ့် ရွာထဲက စာတွေတော့ ဖတ်နေတာပဲ …
ရွာထဲကိုတော့ မဝင်ရရင် နေနိုင်ဘူးရယ် …
ဟို .. မိပေါက်နဲ့ မိဗြဲလည်း ကြောလိုက်ဦး …
နာက သတိရတယ်လို့ ………….
ညည်း မကြောလို့ကတော့ အကြော်ကြွေးတော့ ပေးတော့ဘူးမှတ် ..
ဂျစ်ပစီ မာမီပေါက် ကိုပုဒုံမာ အန်တီအောင် မိုးမင်းသမီး
ကိုအေးKK မအောက်အော့ တို့အားကျေးကျေးပါဗျို့..
ကလောင် တစ်ဖက် စွဲ လို့ ဂေဇက် မှာ မီဒီယာ တိုက်ပွဲ ဝင်ကြရအောင်လား…
၀င်မယ် ၀င်မယ် ၀င်မယ် ၀င်မယ် ၀င်မယ် ၀င်မယ်…
ဂိန်းကစာချင်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကွန်ပူတာလုရ..